इनोभेसन पछाडिका स्टोरी- फिचर - कान्तिपुर समाचार
इनोभेसन पछाडिका स्टोरी
आविष्कारका लागि भित्री इच्छा, जाँगर र निरन्तर प्रयास चाहिन्छ । कसैको हौसलाले यसमा थप इनर्जीको काम गर्छ । हालै राजधानीमा भेला भएका देशका नव वैज्ञानिकहरुको केही कथा रोचक छ ।
माघ २१, २०७३ विष्णु पोखरेल
उनी अरूले फ्याँकेका ब्याट्री र तार बटुल्थे । कबाडीमा बेचिने टिन–फलामका टुक्रा जम्मा पार्थे । तिनलाई साना र सग्ला काठमा खोपेर प्वालमा जोडी बिजुली बाल्थे । कहिले बाँसका भाटालाई मसिना तारले बेरेर ‘इन्डस्ट्रियल इक्युपमेन्ट’ को ‘सेप’ दिन्थे । धेरैले भन्थे– ‘यो बेकामे भयो, घाँसको भारी बोक्न छाडेर भाँडाकुटी खेली हिँड्छ ।’ अरूले ‘बिग्रिएको केटो’ बनाएपछि पर्वत भोक्सिङका राजन गुरुङलाई आफ्नै कामदेखि ‘रिग्रेट’ फिल हुन्थ्यो ।
महेन्द्रोदय माविमा पढ्ने गुरुङ ‘सेभेन क्लास’ मा पुगेपछि स्कुलमा नयाँ ‘साइन्स टिचर’ शिव ढकाल आए । ‘साइन्स ग्य्राजुएट’ शिव ‘योङ एन्ड इनर्जेटिक’ थिए । ‘स्टुडेन्ट’ लाई ‘थ्योरी’ भन्दा ‘प्राक्टिकल’ मा घोटाउँथे । ‘डु समथिङ न्यु’ भनेर जेम्स वाट, न्युटनदेखि आइन्सटाइनका किस्सा सुनाउँथे ।
‘भोलि सबैले सोलार सिस्टम बनाएर ल्याउनु’ भन्दै एक दिन ढकालले ‘होमवर्क’ दिए । ‘क्लास’ का सबैले ‘ब्ल्याङ्क पेपर’ मा पेन्सिलले ‘सोलार सिस्टम’ को ‘स्केच’ कोरेर ल्याए । ती सबै बीच राजन गुरुङचाहिँ समथिङ डिफेरन्ट देखिए । उनले काठ, बाँस, तार, टिन र रेडियोमा प्रयोग हुने ‘मोटर’ जोडेर ‘लाइभ सोलार सिस्टम’ बनाएका थिए ।
राजनको आर्ट र इनोभेसन देखेपछि ढकालले गुरुङलाई यस्तरी हौस्याए, जुन उनले कहिल्यै पाएका थिएनन् । साइन्स टिचरको त्यही इन्सपाइरेसनले राजनको इनोभेटिभ जर्नी ट्रिगर भयो । आखिर उनलाई ट्रिगर दबाउनु न थियो, एक्सिलेटर त पहिलेदेखि हर्ट एन्ड माइन्डमा छँदै थियो ।
‘शिव सरले त्यस दिन मलाई हौसला नदिनु भएको भए, सायद म अरू केही पनि गर्ने थिइनँ,’ राजन भन्छन्, ‘उहाँले मलाई हौसला मात्र दिनु भएन, हेल्प पनि गर्नुभयो, त्यसले अरू चीज बनाउन मोटिभेट गर्‍यो ।’ १९ वर्षीय राजनले काठ, बाँस, निगालोलगायतका ‘लोकल’ सामानलाई प्रयोग गरेर विभिन्न खाले ‘इक्युपमेन्ट’ बनाइसकेका छन् । उनले बनाएका ‘इक्युपमेन्ट’ ‘डमी’ मात्र होइनन्, चलाउन मिल्छन् । तिनलाई ठूलो ‘सेप’ मा निर्माण गर्न सकिने सम्भावना राजनले देखाइसकेका छन् । ‘चाहिनेजति खर्चको व्यवस्था गरिदिने मान्छे भए, धेरै कुरा बनाउन सक्छु, चलाएर पनि देखाएकै छु,’ उनी भन्छन् ।
ढकालको ‘हेल्प’ पछि बनाएका कुरा देखाउन लजाउने राजनले स्कुलमा ल्याएर ‘टिचर’ लाई देखाउन थाले । सुरुमा ‘ह्यान्ड जेनेरेटर’ बनाए । त्यसमा ‘इनर्जी’ ‘प्रोडक्सन’ मात्र भएन, बिजुली नै बल्यो । गुरुङको ‘इनोभेसन’ देखेपछि ‘टिचर’ हरूले उनले बनाएका सबै ‘इक्युपमेन्ट’ को प्रदर्शनी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिए । प्रदर्शनीबाट आएको करिब ५० हजार रुपैयाँले थप ‘इक्युपमेन्ट’ बनाउन सहयोग पुग्यो ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव पर्वत पुगेका बेला गुरुङको ‘इनोभेसन’ हेरिन् । एसएलसी सकेपछि काठमाडौं आए ‘फर्दर स्टडी’ का लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिइन् । एसएसली गरेपछि गुरुङ काठमाडौं त आए तर सरकारी सहयोग पाउन सकेनन् । उनले फस्ट डिभिजन नल्याएकाले ‘साइन्स’ पढ्न पाउने भएनन् । ‘साइन्स’ नै पढ्न नपाएपछि ‘स्कलरसिप’ पाउने कुरै भएन ।
सरकारी सहयोग नपाए पनि गुरुङले आफ्नो ‘इनोभेसन’ लाई जारी राखे । पोखरा आएर दिदीसँग बस्न थाले । ‘लोकल’ चीज खोजेर त्यसमा पुराना रेडियो, टीभी, डीभीडी प्लेयरलगायतका पार्टपुर्जा जोडी थप नयाँ कुरा बनाउन थाले । गुरुङको ‘इनोभेसन’ बारे चर्चा हुन थाल्यो । ‘फ्यामेली’ को आर्थिक अवस्थाले ‘फर्दर स्टडी’ रोकिएको कुरा बाहिर आयो । त्यसपछि पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजले उनलाई ‘फुल स्कलरसिप’ दिने निर्णय गर्‍यो । राजन अहिले त्यही इन्जिनियरिङ डिप्लोमा गर्दैछन् ।
गुरुङले ‘इनोभेसन’ लाई ‘कन्टिन्यु’ गर्दै ‘सेन्सर’ ले चल्ने तोप र ‘ड्रोन’ बनाएका छन् । उनले लाठीचार्ज गर्ने र होटलमा ‘टी सर्भ’ गर्ने रोबोट पनि बनाइसकेका छन् । यसै साता सकिएको ‘क्यान इन्फोटेक’ मा सहभागी हुन आइपुगेका गुरुङले सेन्सरबाट ‘ड्रोन’ उडाएर र तोप पड्काएर धेरैलाई चकित पारेका थिए । उनले त्यहाँ होटलमा ‘टी सर्भ’ गर्ने रोबोटलाई पनि काम गराएर देखाए । केही नयाँ कुरा बनाउन खोज्ने राजनले रिमोटबाट चल्ने ‘ड्रोन’ को साटो ‘सेन्सर’ ले चल्ने बनाएका हुन् ।
‘यो ड्रोनमा औषधि राखेर दुर्गममा पठाउन सकिन्छ, हातको सेन्सरले कन्ट्रोल हुने हुँदा सजिलो पनि छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्छ, फ्रिक्वेन्सीका लागि सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने रहेछ, अनुमति लिएर यसलाई औषधि पठाउने काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ गुरुङलाई ‘क्यान इन्फोटेक’ सम्म ल्याउन र ‘इनोभेसन’ का लागि सहयोग गर्ने ‘काइचो स्मार्ट स्कुल’ का सुमन पौडेल पनि यो ‘ड्रोन’ लाई ‘हुमेनिटेरियन’ ‘वर्क’ मा लाउन सकिने बताउँछन् । ‘ब्याड वेदरमा पनि ड्रोनलाई पठाउन सकिने भएकाले हुमेनिटेरियन वर्क’ मा लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो ४ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा चल्न सक्छ ।’
जसरी ‘टिचर’ को ‘इन्सपाइरेसन’ ले राजनलाई ‘ट्रिगरिङ फ्याक्टर’ को काम गर्‍यो त्यसैगरी स्याङ्जाका कृष्ण तिमिल्सिना, चितवनका प्रयास रिमाल र हेटांैडाका सुमित ढकाललाई भने गत वर्षको ‘ब्लकेड’ ले ‘ट्रिगरिङ’ को काम गर्न पुग्यो । तीनै जना इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा मेकानिकल इन्जिनियरिङका ‘स्टुडेन्ट’ अनि ‘कार रेसिङ’ का पारखी । पढ्ने बाहेकको समय युट्युबमा ‘कार रेसिङ’ हेरेर बित्थ्यो ।
‘फाइनल सेमेस्टर’ नजिकिँदै जाँदा तिनलाई ‘प्रोजेक्ट’ को चिन्ताले सताइरहेको थियो । एक दिन युट्युबमा ‘कार रेसिङ’ को भिडियो खोज्दा उनीहरूले भेटे– ‘सोलार कार रेसिङ’ प्रतियोगिता । नेपालको संविधानमा असहमति जनाउँदै भारतले ‘ब्लकेट’ लगाएको बेला थियो । ‘सोलार कार रेसिङ’ ले तिनको दिमागमा पनि ‘सोलार कार’ बनाउने भूत चढाइदियो । ‘त्यसपछि हामी तीन जनाले सल्लाह गरेर सोलार कार बनाउने प्रपोजल तयार पार्‍यौं,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘क्याम्पसमा गएर भोलिपल्ट हाम्रो प्रोजेक्टमा ज्वाइन गर्न चाहने साथीहरूलाई पनि समेटेर ८ जनाको ग्रुप बनायांै ।’ उनीहरूको समूहमा थपिए– पोखराकै सौगात कोइराला, नवलपरासीका राजन खनाल, बर्दियाका सागर अधिकारी, दोलखाका दीपक कार्की र मोरङका खगेन्द्र कार्की ।
स्वदेशमै कार त्यो पनि सोलारबाट चल्ने । ‘इन्जिनियर’ हरूले ‘इम्याजिनेसन’ त गरे तर ‘इन्जिन’ बनाउने कसरी ? अनि कारको नमुना बनाएर मात्र भएन गुड्नु पनि पर्‍यो । धेरैले उनीहरूलाई ‘डिस्करेज’ नै गरे । क्याम्पसका कतिपय प्राध्यापकहरूले समेत ‘यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट आँटेर सक्सेस हुँदैनौ, सानो केही गर’ भन्ने ‘सजेसन’ दिए । ‘हामी अरूका कुरा सुनेर ‘डिस–मोटिभेटेड’ भएनौं,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘नत्र त सक्सेस हुने चान्स नै थिएन ।’
आठ युवाको त्यो समूहले आखिर सोलारबाट चल्ने कार बनाएरै छाड्यो । भलै त्यसका लागि एक वर्षको मेहनत लाग्यो । उनीहरूले पुरानो गाडीको स्टेयरिङ खोजेर ल्याए । त्यसलाई धेरै मेहनत गरेर घोटीघोटी मिलाउने काम गरे । रक्सौल पुगेर डिफ्रेन्सियल र मोटर खरिद गरे । अनि तीनलाई जोडेर इन्जिन बनाउन सफल भए । टिन, फलाम र सिसाको साटो बाक्लो प्लास्टिक लगाएर कार तयार पारे ।
गत भदौमा उनीहरूले तयार पारेको कार गुड्यो आफ्नै क्याम्पस परिसरमा, त्यसपछि पोखरा सहरमा । नेपालीले बनाएको कार सहरमा गुडेपछि त्यसलाई हेर्नेको घुइँचो लाग्यो । उनीहरूले पोखरा उकालो मानिने नदिपुर हाइटमा पनि कार उकाले । ‘हामीले पोखरामा गुडाउँदा उकालो पनि चढेकाले नेपालको भूगोललाई पनि सुहाउने गरि कार बनाउन सकिँदोरहेछ भन्ने भएको छ,’ कार निर्माता समूहकै रिमालले भने ।
घाम र बिजुली दुवैबाट चार्ज गर्न मिल्ने ब्याट्री यसमा प्रयोग गरिएकाले उनीहरूले यो कारलाई नाम दिएका छन्– ‘सोलार हाइब्रिड’ । अहिले टोयोटा, होन्डालगायतका कम्पनीहरूले पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने हाइब्रिड कार बनाइसकेका छन् । ती कारलाई ब्याट्री वा पेट्रोल–डिजेलबाट चलाउन सकिन्छ । तिनै कार जसरी दुईखाले ‘इनर्जी’ बाट चलाउन सकिने भएकाले उनीहरूले यो कारलाई पनि ‘सोलार हाइब्रिड’ भनेका हुन् ।
एक सय ९० वाटका दुईवटा सोलार प्यानल राख्न मिल्ने यो कारमा २४ भोल्टको ब्याट्री जोड्नुपर्छ । अहिले उनीहरूले १२–१२ भोल्टका दुईवटा ब्याट्री जोड्ने सिस्टम बनाएका छन् । करिब २ लाख खर्च गरेर बनाएको कारमा चार जना बस्न मिल्छ । एकपटक चार्ज गरेपछि करिब १ सय ५० किलोमिटर गुडाउन सकिने यो कार नेपालका लागि ‘सुइटेबल’ बताउँछन् रिमाल । ‘यो कार हामीलाई एकदमै ठीक हुन्छ, सिटी ड्राइभका लाग त सबैभन्दा राम्रो,’ उनले भने, ‘५ लाखसम्ममा नेपालमै बनाउन सकिन्छ ।’ लगानीकर्ता भेटे आफूहरू अझै ‘मोडिफाई’ गरेर स्वदेशमै सस्तोमा कार उत्पादनका गर्न सक्ने उनीहरू बताउछन् ।
पर्वतका गुरुङ र पोखराका युवाको ‘इनोभेटिभ ब्रेन’ लाई ‘क्लिक’ गरेर जागरुक बनाए–दुई फरक ‘इन्सिडेन्ट’ले । कतै तपाईंको ‘ब्रेन’ ले पनि ‘इनोभेसन’ का लागि ‘ट्रिगरिङ फ्याक्टर’ त खोजिरहेको छैन ?
प्रकाशित : माघ २१, २०७३ ०९:३२
छाप बुझाएर जिविसमा धर्ना
- महत्त्वपूर्ण सिफारिस रोकिए, बिरामी प्रभावित
-‍ तलबको ५० प्रतिशत भत्ता माग
- प्रदेशसभामा खटाउँदा तह बढाउनुपर्ने
माघ २१, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
सुर्खेत — तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता माग राखी आन्दोलित गाविस सचिवले तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएयताका हरेक आन्दोलनमा निर्वाचनको माग राखे पनि सरकार गम्भीर नहुँँदा कार्यबोझ बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधि हुँदा ५३ जनाले गर्ने काम १४ वर्षयता एक्लै गर्नुपरेको सचिवको गुनासो छ । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका केन्द्रीय प्रतिनिधि तिलकराम अधिकारीले निर्वाचन नहुँदा सबै दोष आफूहरूमाथि थपिएको बताए । ‘जुनसुकै सरकारले हाम्रो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा गाविस सचिवले अनावश्यक तनाब झेल्नुपरेको छ ।’ ०५९ साउन १ देखि मुलुकभरका गाविस जनप्रतिनिधिविहीन छन् । त्यसयता सबै काम सचिवले गर्दै आएका छन् । ‘जनशक्ति उही छ । बजेट र कार्यक्रम बढेको बढ्यै छन् । एक्लो सचिवले कति मात्र भ्याउने ?,’ सालकोट गाविसका सचिवसमेत रहेका उनले भने, ‘अन्य निकायका कर्मचारीले जसरी हामीले सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनौं ।’
कार्यबोझ बढी, दलीय हस्तक्षेपलगायत कारणले निजामती सेवाका अधिकांश कर्मचारी गाविस आउन मान्दैनन् । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष नारायणदेव गिरीले हुलाक सेवाका बाहेक अन्य सेवाबाट कर्मचारी गाविसमा आउन नचाहेको सुनाए । सरकारले गाविसबाट अन्य सेवामा सरुवा भई अन्य मन्त्रालयतअन्तर्गतका निकायमा जान रोक लगाएको छ । गाविस सचिवले यो प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै, निजामती सेवालाई प्रदेश र संघमा वर्गीकरण गरी प्रदेश सेवामा खटाउँदा स्वत: एक तह बढाएर समायोजन गर्नुपर्ने माग छ ।
केन्द्रको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनका कारण बुधबारदेखि गाविसको कामकाज ठप्प छ । जिल्लाका सबै सचिव सदरमुकाममा छन् । उनीहरूले स्थानीय विकास अधिकारीलाई गाविसको छाप बुझाएर जिविसमा धर्ना दिए । अध्यक्ष गिरीले तत्काल माग सम्बोधन आग्रह गरे । आन्दोलनका कारण नागरिकतालगायत महत्त्वपूर्ण सिफारिस रोकिएको छ ।
केन्द्रकै अगुवामा दैलेखका गाविस सचिव पनि चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहीबारदेखि उनीहरूले गाविसको कामकाज ठप्प पारेका छन् । आफ्ना माग बेवास्ता गरिएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको केन्द्रको जिल्ला समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेशमान सिंहले बताए । उनले सरकारबाट गत वर्ष स्वीकृत भएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता तुरुन्त भुक्तानी गर्न माग गरे ।
प्रोत्साहन भत्तासहित विभिन्न नौबुँदे माग राखेर आन्दोलनरत गाविस सचिवले काम रोकेपछि म्याग्दीका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । सचिवले बिहीबार कार्यालयको छाप जिविसमा बुझाइदिएका छन् । नागरिकता सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता र मालपोत सिफारिससँगै विकास निर्माणका काम पनि रोकिएका छन् । ‘गाविस सचिवहरूले कार्यालयको छाप बुझाएपछि गाविस तहबाट हुने सबै काम रोकिएको छ । यसबारे लिखित जानकारी मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ जिविसका सूचना अधिकारी पदमबहादुर भण्डारीले भने ।
गाविसमै काम नभएपछि बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयसमेत प्रभावित हुन पुगे । दैनिक २५/३० वटा नागरिकता वितरण गर्ने प्रशासन कार्यालय सुनसानजस्तै थियो । ‘गाविस सचिवले पहिल्यै सिफारिस गरेका सेवाग्राही मात्र आएका छन्,’ सहायक प्रजिअ यादवनाथ आचार्यले भने, ‘गाविस सचिवहरूले कार्यालयको छाप नै जिविसमा बुझाएकाले सेवाग्राही समस्यामा परेको भन्ने जानकारी आएको छ ।’
गाविस सचिवको आन्दोलनले सातादेखि जनकपुमार नागरिकता, पासपोर्ट, जग्गा नामसारी, व्यक्ति पहिचान खुल्ने सिफारिसका काम रोकिएका छन् । क्यान्सरग्रस्त पिता रामशोभित ठाकुरको उपचारका लागि गाविसको सिफारिस लिन बिहीबार जिविस आएका खरिहानी–२ का जितेन्द्रकुमार ठाकुर रित्तै हात फर्किए । उनले भने, ‘सरकारले गरिबका लागि उपचारमा छुट दिने घोषणा गरेको छ तर गाविसले सिफारिस दिँदैन । मेरा पिता उपचार नपाएरै बित्ने भए ।’ उनका बुबा ६५ वर्षीय रामसोभित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरमा माघ १ गतेदेखि भर्ना छन् ।
१३ गतेदेखि काम ठप्प पारेका गाविस सचिवले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र, धनुषाका अध्यक्ष केवलकुमार दासका अनुसार स्थानीय विकास अधिकारीले पटकपटक मौखिक तथा लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि माग पूरा गरेका छैनन् । ‘सेवाग्राहीलाई मर्का परिरहेको हामीलाई थाहा छ तर हामीले स्थानीय विकास अधिकारी लिखित प्रतिबद्धता दिनसमेत तयार छैनन् ?’ उनले भने । यहाँका गाविस सचिवले पनि आआफ्ना लेटरप्याड र छाप जिविसमा बुझाइसकेका छन् ।
गाविस सचिव आन्दोलनमा उत्रिएपछि सिन्धुलीका ५० वटै गाविसको काम प्रभावित हुन पुगेको छ । विशेष गरी गाविसबाट नागरिकतालगायत विभिन्न सिफारिस लिनुपर्ने सर्वसाधारण तथा आवास अनुदानको दोस्रो किस्ता लिने तयारीमा रहेका भूकम्पपीडित मर्कामा छन् ।
दोस्रो किस्ता वितरण गर्न प्राविधिकको मूल्यांकन र गाविस सचिवको सिफारिस आवश्यक पर्छ । सचिवहरू दुई दिनयता गाविस छाडेर सदरमुकाममा जम्मा भएका छन् ।
माग पूरा नभएसम्म गाविसका कुनै काम नगर्ने गाविस हकहित संरक्षण केन्द्र, सिन्धुलीका अध्यक्ष रोहित कार्कीले बताए । ‘केन्द्रको सर्कुलर अनुसार बुधबार जिल्लाका ५० वटै गाविसका सचिव र अध्यक्षको छाप जिविसमा बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘माग सम्बोधन गरिए तत्काल काम फर्कन्छौं ।’
भूकम्प पीडितदेखि नियमितसाथै विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित हुने भएपछि सचिवहरूलाई गाविस फर्कन निर्देशन गरिए पनि अटेरी गरेको स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद हुमागााईले जनाए । ‘नियमसम्मत माग भए सरकारले सम्बोधन गर्छ तर काम नरोक्नुस् भनेका छौं,’ उनले भने ।